Hnd | YOUTH International College Myanmar
WHAT & WHY HND ?
HND Diploma Awarded by Edexcel (UK) …
Alternate Education for your Career and Life …
Can Choose Variety of Career Path…
UK Degree that can Learn at Local…
Can start from National Diploma…
HND Diploma Programme is Higher Education…
Top Up Bachelor Degree after HND Diploma…
Vocational Training rather than Academic…
Student Centered and Action Learning…
No Exam, No By Heart, Open Book Assignment…
HND Diploma ဆိုတာ ဘာလဲ…
HND ဒီပလိုမာ ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ရှိသော Edexcel ဆိုသည့် အဖွဲ့အစည်းကြီးမှ ပေးအပ်သော Higher National Diploma ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းအသိအမှတ်ပြုပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ပေးအပ်သော ဒီိပလိုမာဖြစ်ပါသည်။
Edexcel ဆိုတာ ဘာလဲ..
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် အင်မတန်မှ အရှိန်အ၀ါကြီးမားသော Pearson ဆိုသည့် အဖွဲ့အစည်းကြီးရှိပါသည်။ Edexcel က ၎င်းPearson အဖွဲ့အစည်းကြီးက ဖြစ်ပါသည်။ Edexcel က UK မှာရှိပြီးတော့ နိုင်ငံပေါင်း (၁၁၀) ၊ Pearson ပေါင်း (၂၅၀၀) ကျော်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေသောအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ပညာရေးနှင့် ပက်သက်ပြီး အရှိန်အ၀ါ ကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းလဲ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် သင်ကြားနိုင်မည့် ဘာသာရပ်များ များစွာရှိပြီး ဥပမာအားဖြင့် Engineer, Business, Media, IT, Tourism စသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယခု YOUTH International College မှ သင်ကြားပို့ချနိုင်မည့် HND Diploma မှာကတော့ QCF Level5အဆင့်ရှိတဲ့ Higher National Diploma ဖြစ်ပါသည်။ QCF ဆိုတာကတော့ Qualification & Credit Framework ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်အစိုးရအနေနဲ့ သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးမျိုးသော College တွေ တက္ကသိုလ်တွေက ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ဘယ်လိုသင်သင် တတ်မြောက်မှုကို Standard ထားသည့်အနေနှင့် စံနှုန်းတစ်ခုသက်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းကပဲသင်သင် ၊ ဘယ်ကျောင်းမှာပဲတတ်တတ် အဓိကက QCF ကိုပဲ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ QCF Level6ဆိုရင် ဘွဲ့ဖြစ်ပြီး (7) ဆိုရင် Master အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Level (8) ဆိုရင်တော့ Ph.D အဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။
BTEC ဆိုတာ ဘာလဲ..
BTEC ဆိုတာ Business & Technology Education Council ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ၎င်းဟာ Vocational Quatification ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Diploma ပြီးတာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးတဲ့ ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Diploma ရပြီးလျှင် နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များတွင် Year3ကိုဆက်လက်တတ်ရောက်ကာ IT ဘွဲ့ကို ရယူနိုင်ပါပြီ။ အလုပ်လုပ်လိုပါကလည်း Certificate သင်တန်းများလို Professional / Technician ထက်ပိုသော Manager Level ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
HND မှာ သင်ကြားရမယ့် ဘာသာရပ်များကတော့ -
ပုံမှန်ဆိုလျှင်ဘာသာရပ်ပေါင်း (၁၆)ခု တနည်းအားဖြင့် Credit ပေါင်း (၂၄၀) ဖြစ်အောင် သင်ကြားရပါတယ် ။ YOUTH International College က သင်ကြားတဲ့ HND Diploma ကတော့ Cisco ရဲ့ CCNP ကိုပါ ပူးတွဲ သင်ကြားတဲ့အခါမှာ ဆရာကပဲ တောက်လျှောက်သင်ကြားနေတာ မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းသားကပါ Assignment တင်ခြင်း၊ Presentation များပြုလုပ်ရခြင်း၊ Project ပြုလုပ်ရခြင်းတို့ဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် No Exam စားမေးပွဲ လုံးဝ မရှိသော သင်ကြားမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အလွတ်ကျက်ဖြေလို့မရဘဲ အမှန်တကယ်တတ်သော သူများသာလျှင် Assignment နှင့် Project များ ပြုလုပ်နိုင်မည်။ ၎င်း Diploma ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော College များမှာ ကျောင်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကတော့ ဒီ HND ဟာ ကျောင်းသားဗဟိုပြု သင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အချို့သော College များမှာကတော့ ဆရာဗဟိုပြု သင်ကြားပါတယ်။ ဒါဆိုလျှင် ဘာမှမထူးပါ။ မြန်မာပြည်အနေနှင့် ကျောင်းသားဗဟိုပြု သင်ကြားမှုကို လုံးလုံးကြီး ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲတာကြောင့် YOUTH International College မှာ ဆရာနှင့် ကျောင်းသားမျှတအောင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ တတ်ရောက် သင်ကြားနိုင်ပါသလဲ...
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး (သို့) IGCSE, GCE-A Level အောင်မြင်ပြီးသူတိုင်းတတ်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများအနေနှင့် HND တွဲဖက် Course ကိုတတ်ရောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရပြီးသူများလည်း တတ်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသူ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် အသက် ၁၆ နှစ်မှ အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်အထိ တတ်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
HND တွဲဖက် Course က ဘာသာရပ် ၉ ခုရှိပြီး အချိန်အားဖြင့် (၆) လ သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ၂လတိတိသာ ၎င်းတွဲဖက် Course ကိုသီးသန့် သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ဘာသာ ရပ်များအတွက် ၄လ ကို HND သင်သည့် ၂နှစ်အတွင် ပူးတွဲသင်ကြားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင် IELTS ကို ကျောင်းသားများအားသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ HND Year 1 တတ်နေစဉ် ကာလအတွင်းမှာ Assignment ပြုလုပ်ခြင်းကို အင်္ဂလိပ်လို ပြုလုပ်ရမည့်အပြင် နိုင်ငံတကာမှာ ကျောင်းသွားတတ်ရင်လည်း အင်္ဂလိပ်စာကောင်းမွန်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံကောင်းအောင် IELTS မသင်ခင်မှာ4– Skills ကိုသင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ HND Year 1 တွင် Semester တစ်ခုချင်းစီသည် အချိန်ကာလအားဖြင့် (၅)လ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Semester တစ်ခုပြီးတိုင်း Assignment လုပ်ရန် (၃)ပတ်အချိန်ပေးပြီး (၁) ပတ်ကျောင်းပိတ်ပါသည်။ Year2သည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းအတိုင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကြေးမှာ ၂ နှစ်စာလုံးအတွက် ငွေကျပ် ( ၇၀ )သိန်း ဖြစ်ပြီး HND တွဲဖက် Course သည် ငွေကျပ် (၁၅)သိန်း ကျပါသည်။ ထို့အပြင် Edecxel သို့ Register Fees ငွေကျပ် (၅)သိန်းပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် Discount ကာလဖြစ်လျှင် ၎င်းဘာသာရပ်အတွက် Discount ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
Assignment များကို သင်သည့်ဆရာက အမှတ်ပေးသည့်ပုံစံမဟုတ်ဘဲ အခြားတစ်ယောက်က စစ်ဆေးသည့် Cross Check ပုံစံမျိုးဖြင့် အကဲဖြတ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Internal Verifier မှ ထပ်မံစစ်ဆေးပါသည်။ Assignment ကို ပုံမှန် ပြီးမြောက်အောင် ဖြေဆိုရုံပဲဆိုလျှင် Pass သာရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များနှင့် ရည်ညွန်းကိုးကားကာဖြေဆိုလျှင် Merit ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုထက်ပို၍ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ( ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ် ၊ အထောက်အထားတွေ ရည်ညွန်းကိုးကားမှုများ) နှင့် ဖြေဆိုသွားလျှင်တော့ Distinction ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမှန်တကယ်တတ်ကျွမ်းသူများသာလျှင် Distinction ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့မှသာလျှင် ကျောင်းသားအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာမှာ ကျောင်းသွားတတ်သည်ဖြစ်စေ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးကျေးဇုး . . .
၎င်း Diploma ကို ရရှိထားသူသည် ဘယ်အသက်အရွယ်၊ ဘယ်အချိန်ကာလကို ရောက်ရောက် နှစ်တွေဘယ်လိုပဲပြောင်းသွား မိမိရရှိထားသော Diploma မှာ အမြဲ အသက်ဝင်နေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Certificate များသည် သက်တမ်းရှိပါသည်။ ဥပမာ (၂) နှစ်တန်သည် (၃) နှစ်တန်သည် ဖြစ်ပါသည်။ Diploma ဆိုသည်မှာ သက်တမ်းကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အသက်ကြီးမှ ပညာပြန်သင် ရတာမျိုး၊ ကျောင်းပြန်တတ်ရတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ယခုငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် အနည်းဆုံး Diploma တစ်ခု ရယူထားသင့်ပါသည်။ ထို့ထက် ပိုလျှင် ဘွဲ့ကို ဆက်ယူသင့်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်၌ အရာရှိဖြစ်ဖို့ဆိုသည်မှာ Certificate နှင့် မလုံလောက်ပါ အနည်းဆုံး Diploma နှင့် ဘွဲ့လက်မှတ်ရရှိထားသင့်ပါသည်။ မဟုတ်ပါက အောက်ခြေအဆင့်တွင်သာ တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ငယ်တုန်းတော့ မသိသာပါ။ လူငယ်များမှာ Certificate များကိုင်၍ အလုပ်လုပ်နေသည်ဆိုသည်မှာ ငယ်တုန်းတွင် ကောင်းသည်ဆိုတာ သတိချပ်သင့်ပါသည်။ HND သည် အလုပ်အကိုင်အတွက်ရော နိုင်ငံတကာမှာ ကျောင်းသွားတတ်မည့်သူများအတွက် အလွန်သင့်တော်သော Diploma တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များမှာလည်း လိုလိုလားလား အလုပ်ခန့်ချင်ကြပြီး နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များမှလည်း HND ၏ အရည်အချင်းကို လက်ခံပြီးသားဖြစ်ပါသည်။
ထူးခြားချက် . . .
YOUTH International College မှ ပို့ချသော HND Diploma သည် Cisco ၏ CCNP ကိုပါ ထည့်သင်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်မရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Diploma ပြီးသည်နှင့် ကျောင်းသားသည် Cisco CCNA, CCNP နှစ်ခုစလုံးကို ပြီးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျောင်းသားသည်း CCNA, CCNP Certified ဖြစ်ရန် ၎င်း Exam များကို Pearson VUE Test Center တွင် Exam Fees ပေး၍ အောင်မြင်အောင်ဖြေဆိုဖို့တော့ လိုပါသည်။ Cisco System Inc ဆိုသည်မှာ Networking System တွင် ကမ္ဘာ နံပါတ် ၁ ထိပ်တန်းဝင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏CCNA, CCNP သင်တန်းကြေး ၊စာမေးပွဲကြေး များသည် မြင့်မားသည့်အလျောက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းလည်းပေါများပါသည်။
ကျောင်းဝင်ခွင့်. . .
Year2ပြီးသွား၍ ဘွဲ့ဆက်ယူမည့် ကျောင်းသားများသည် မြန်မာပြည်မှာဘဲ ဆက်တတ်၍ရသလို နိုင်ငံတကာတွင်လည်း သွား၍တတ်ရောက်နိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ သြစတြေလျ ) ထိုသို့သွား၍ တတ်ရာ၌ နောက်ထပ် တစ်နှစ်တတ်ရောက် ပြီးတာနှင့် ဘွဲ့ရသည့်တက္ကသိုလ်များရှိသလိုနှစ်နှစ်တတ်မှ ဘွဲ့ရသည့် တက္ကသိုလ်များလည်း ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်မှ ကျောင်းသားများ အတတ်များကြသော တက္ကသိုလ်မှာ အင်္ဂလန်မှာ Greenwich University ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတက္ကသိုလ်ဆိုလျှင် နောက်ဆုံးတစ်နှစ် တတ်တာနှင့် ဘွဲ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဘွဲ့မှာ B.Sc (Hons:) Computing (UK) ဖြစ်ပါသည်။
YOUTH Inetrnational Collage မှHND ကျောင်းသားများကို ပံ့ပိုးပေးမည့်အစီအစဉ်
YOUTH International College သည် YOUTH Computer Co., Ltd. မှဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ YOUTH Computer Co., Ltd. သည် (၁၉၉၇) ခုနှစ်ကတည်းက ဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ထားပြီး အဆင့်မြင့် ICT နည်းပညာများကို သင်ကြားပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ထက်တိုင် နာမည်ပျက်မရှိဘဲ ဂုဏ်သတင်းမွှေးပျံ့စွာဖြင့် ရပ်တည်နေသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာပြည်၏ ပထမဆုံးသော Cisco Learning Partner လည်းဖြစ်ပါသည်။ Pearson VUE အသိအမှတ်ပြုရရှိထားသော Online Test Center ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် သင်တန်းနှင့်အတူ Test Center ကိုတွဲ့ဖွင့်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာပြည်အနှံ့ သင်တန်းခွဲ Franchance Center များကို (၂၀) ခု တိတိဖွင့်လှစ် ထားရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်e– Library / Library များလည်းထားရှိထားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် Laptop တစ်လုံးစီဖြင့် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိ်ု့အပြင် ကျောင်းသားများအသုံးပြုရန်အတွက် Cisco Lab များကိုလည်း ထားရှိပေးထားပါသည်။
YOUTH International College မှ HND ကို သင်ကြားမည့်ဆရာများ . . .
ဆရာကိုဇော်လင်းသည် စာသင်ကြားမှုနှင့် ပညာရေးလုပ်ငန်းများတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ခန့် အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Cisco System Inc ., (USA) မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော Certified Cisco System Instructor (CCSI # 34928) တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ HND ဘာသာရပ်များကို ဆရာကိုဇော်လင်းဦးဆောင်ပြီး ကွန်ပျူတာ Master ဘွဲ့ရ ဆရာများနှင့် Cisco Certified ဆရာများက စေတနာ အရင်းခံကာ စနစ်တကျ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ သင်ကြားပေးသည့်အပြင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် Work Smart ဖြစ်စေရန် စည်းကမ်းပိုင်းစိတ်ဓါတ်ပိုင်းနှင့် Ethics ပိုင်းပါထည့်သွင်း သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
YIC တွင် တက်ရောက်နိုင်သော Edexcel (UK) Diploma သင်တန်းများ
LEVEL3NATIONAL DIPLOMA IN IT (UK)
Impact of the Use of IT on Business System
Duration – 1 Year Benefits…
No Need to Passed University Matriculation
Easy to Entry and Proceed to Higher Education
Vocational Training, Prefer more Practical
No Exam, No by Heart, Open Book Assignment
HND DIPLOMA IN COMPUTING AND SYSTEMS DEVELOPMENT (UK)
HND DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT (UK)